अष्ट्रेलिया महिलाहरुका लागि कत्तिको सुरक्षित ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलिया महिलाहरुका लागि कत्तिको सुरक्षित ?
प्रकाशित मिति: ११ माघ २०७५, शुक्रबार
अष्ट्रेलिया । पछिल्लो हप्ता अष्ट्रेलियाको मेल्बर्नस्थित राति घर जाँदै गर्दा एक २१ वर्षीया युवतीको हत्या भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । इजरायली अरब विद्यार्थी आया मसर्वेको मृत्युले अष्ट्रेलियामा महिला हिंसाको बढ्दो स्वरुपबारे ठूलो खुलासा गरेको हो । अहिले यस विषयमा राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विवाद चलिरहेको छ ।
उनका परिवारका अनुसार अष्ट्रेलिया अन्य देशको तुलनामा धेरै सुरक्षित मानिएकाले नै आयाले आफ्नो पढाई पूरा गर्न त्यस ठाउँलाई चुनेकी थिइन् । यसरी उनको मृत्युले पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा भइरहेका यस्ता हाइ प्रोफाइल घटनाबारे सबैको ध्यान केन्द्रित गराएको छ । गत वर्षपनि एक हाँस्य कलाकारको बलात्कारपछि निर्मम हत्याले सबैलाई चकित पारिदिएको थियो ।
‘अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स’ को तत्कालीन रिपोर्टका अनुसार तीन मध्ये लगभग एक अष्ट्रेलियन महिलाले शारीरिक हिंसाको सामना गर्ने गर्दछन् भने पाँचमा एक जना यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि आदिवासी र क्वीन्सल्यान्ड स्थित ‘टोरेस स्ट्रेट’ टापुका बासिन्दामाझ महिला हिंसाको दर उच्च रहेको पाइएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार १० मध्ये एक महिलाहरु अन्जान व्यक्तिबाटै हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् ।
वास्तवमा घरेलु हिंसालाई अष्ट्रेलियामा सामान्य मान्ने गरिएको छ । किनकी त्यहाँ हरेक हप्ता औसतमा एक महिला वर्तमान वा पूर्वप्रेमीको हातबाट मारिने गरेका छन् । यसबारे युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका सामाजिक कार्य विश्लेषक असोसिएट प्रोफेसर रुथ फिलिप्सले भेनका छन्, “हत्या, महिला हिंसाको सबैभन्दा चरम रुप हो किनकी सामान्यतया महिलाहरु आफ्नो घरमै शारीरिक वा अन्य तरिकाले घाइते भएका हुन्छन् जसलाई गम्भीर समस्या मान्न सकिन्छ । तर यसलाई संकटका रुपमा भने लिइएको छैन किनकी यो अष्ट्रेलियाको संस्कृतिमा हावी लैङ्गिक शक्तिको परिणाम हो ।”
यसरी महिला मात्र नभएर बालबालिकाको हत्याले पनि अष्ट्रेलियामा राष्ट्रिय विवाद खडा गरेको छ । गतवर्ष कलाकार युरीडिस डिक्सनको मृत्युपछि अक्टोबरमा मात्र ११ महिलाको हिंसात्मक परिस्थितिमा मृत्यु भएको पाइएको थियो । यसबारे अर्का अनुसन्धानकर्ता असोसिएट प्रोफेसर केल्सी हगर्टीले भनेका छन्, “कहिलेकाहिँ महिलाविरुद्ध जारी हिंसाका दुर्घटना सामूहिक रुपमा बाहिर आउने गर्छन् जसले हामीलाई समस्याको जटिलताबारे सचेत गराउँछ ।”
यसविरुद्ध रोजी बेटी नामक एक महिलाले शक्तिशाली आवाज उठाएकी छन् । २०१४ मा उनका छोरा ल्युक तिनैका पिता अर्थात रोजीका पतिका हातबाट मारिएपछि उनी घरेलु हिंसाविरुद्धको अभियानमा जुटेकी हुन् । त्यस्तै २०१२ मा मेल्बर्नमै आइरिस महिला, जील मिएगरको बलात्कार अनि हत्याको घटनाले पनि त्यसबेला जनतालाई आक्रोशित बनाएको थियो । सो घटनापछि नै अष्ट्रेलिया समाजको भयानक अवस्थाबारे हविगत भएको बताइन्छ । त्यतिबेला यसविरुद्ध सर्वसाधारणहरुले ठूलो विरोध र्याली निकालेका थिए जसपछि सरकारले अपराधीविरुद्ध कडा कानुन ल्याएको हो । यसैगरी गतहप्ता आयाको मृत्युप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अष्ट्रेलियामा महिलाविरुद्धको हिंसा सामान्य अवस्थामा चिन्ताजनक मानिएको छ तरपनि विशेषज्ञहरुले यसलाई अन्य विकसित मुलुकहरुको तुलनामा कम भयानक बताउने गरेका छन् । विशेषगरी गरिब देशहरुमा घरेलु हिंसा नै महिला दुर्व्यवहारको प्रमुख कारण रहँदै आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । त्यसमा पनि अफ्रिकी र अमेरिकीहरु आफ्नो पार्टनरको हातबाट मारिने सम्भावना अधिक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जी–२० राष्ट्रहरुमा अष्ट्रेलिया महिला विरुद्ध बढ्दो घरेलु हिंसाको सूचीमा आठौँ स्थानमा रहेको छ जसमा पाँच देशका डाटा उपलब्ध थिएन ।
यसरी २०१२ मै अष्ट्रेलियन सरकारले महिला तथा बालबालिका हिंसा कम गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजनासहित त्यसविरुद्ध कडा नीति अपनाएको थियो । तरपनि अवस्थामा आजसम्म सुधार नआएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यस्तोमा महिलाप्रति व्यापक अनादरको प्रचलनलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । अष्ट्रेलियाको लैङ्गिक विभेदका आयुक्त केट जन्किन्सले बीबीसीसँग भनेका छन्, “हामीले महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसालाई त्यतिबेला मात्र अन्त्य गर्न सक्छौँ जब महिलाहरु सुरक्षित मात्र नभएर सबै निजी तथा सार्वजानिक स्थलमा सम्मानित र मूल्यवान् ठहरिन्छन् ।” -बाह्रखरी
सिडनीमा २५ वर्षीया नेपाली युवतीले गरिन् आत्महत्या
अस्ट्रेलिया । सिड्नीको रकडेलस्थित फ्रेड्रिक स्ट्रिटमा श्रीमानसँग बस्दै आएकी २५ वर्षीया नेपाली युवती आफ्नै […]
अस्ट्रेलियामा रहेका युवाहरुले जाजरकोटमा राहत वितरण गर्ने
तक्दीर अधिकारी-असनेपाल न्युज । सिड्नी । अस्ट्रेलियामा रहेका युवाहरुले जाजरकोटमा राहत वितरण गर्ने भएका छन् । […]